Warar - Faa'iidooyinka qalabka mashiinka CNC
Faa'iidooyinka qalabka mashiinka CNC
Qalabka mashiinka CNC waa soo gaabinta qalabka mashiinka kumbuyuutarka lagu xakameeyo, kaas oo ah qalab mashiin si otomaatig ah ugu qalabeysan nidaam lagu xakameeyo barnaamijka. Nidaamka xakamaynta ayaa si macquul ah ugu shaqeyn kara barnaamijka lambarrada xakamaynta ama tilmaamo kale oo astaamo ah, oo qayaxaya, si markaa qalabka mashiinku u dhaqaaqo ugana shaqeeyo qaybaha.
Marka la barbardhigo qalabka mashiinka caadiga ah, qalabka mashiinka CNC wuxuu leeyahay astaamaha soo socda:
Prec Hufnaan dheeri ah oo shaqeynaya oo tayo sare leh oo shaqeynaya;
Link Iskuxirid iskudhaf badan ayaa laqaban karaa, iyo qaybo qaabab isku dhafan laga shaqeyn karo;
Markay qaybaha wax beddelaan isbeddelaan, guud ahaan waxay u baahan yihiin oo keliya inay beddelaan barnaamijka xakamaynta tirada, kaasoo badbaadin kara waqtiga diyaarinta wax soo saarka;
Tool Qalabka mashiinka laftiisu wuxuu leeyahay saxsanaan sare iyo qalafsanaan sare, wuxuu dooran karaa qaddar farsameyn wanaagsan, wuxuuna leeyahay wax soo saar sarreeya (guud ahaan 3 ~ 5 jeer oo ah qalabka mashiinka caadiga ah);
Tool Qalabka mashiinku wuxuu leeyahay heer sare oo otomaatig ah, taas oo yareyn karta xoogga shaqaalaha;
Requirements Shuruudaha sare ee tayada hawl wadeenada iyo shuruudaha farsamo ee shaqaalaha dayactirka.
Sababtoo ah farsamaynta lathe-ka ee CNC waa shaqo sax ah oo sarreysa, hababka wax-u-qabadkeeduna waa isugu urursan yihiin oo tirada qaybaha isku hayaa way yar tahay, sidaa darteed shuruudaha sare ayaa loo soo bandhigayaa qalabka CNC ee la adeegsaday. Markaad dooranayso qalabka loogu talagalay qalabka mashiinka CNC, waa inaad tixgelisaa arrimaha soo socda:
Nooca, qeexida iyo saxsanaanta qalabka CNC waa inuu awoodaa inuu buuxiyo shuruudaha mashiinka lathe CNC.
Prec Sax sax ah. Si loo buuxiyo saxnaanta sare iyo shuruudaha beddelka qalabka otomaatigga ah ee falanqaynta lathe CNC, aaladda waa inay lahaato saxnaan sare.
Reli Kalsoonida sare. Si loo hubiyo in aysan jiri doonin wax shil ah oo cillad ah iyo cilladaha ka imaan kara aaladda ku jirta mashiinka CNC, taas oo saameyn ku yeelan doonta horumarka habsami leh ee mashiinka, aaladda iyo qalabka la socda oo ay weheliso waa inay lahaadaan kalsooni wanaagsan iyo is waafajin adag. Sax processing birta
Dura cimri dheer. Qalabka ay farsameeyaan lathes-ka CNC, ha ahaado mid qallafsan ama dhameystir ah, waa inuu lahaadaa cimri dherer ka badan kan loo isticmaalo aaladaha mashiinka caadiga ah, si loo yareeyo tirada jeer ee wax looga beddelayo ama loo shiidayo qalabka iyo dejinta qalabka, taas oo kor loogu qaadayo ka shaqeynta qalabka mashiinka CNC. . Karti karti iyo hufnaan wax soo saar.
Chip Wax jabinta jabinta iyo ka-qaadista jibbaarada wanaagsan. Falanqaynta lathe-ka ee CNC, jabinta jabinta iyo ka-saarista qashin-gacmeedka gacanta looma qaban sida qalabka mashiinka caadiga ah. Chips-ka waa fududahay in lagu duubo aaladda iyo qalabka shaqada, taas oo dhaawici doonta qalabka isla markaana xoqin doonta dusha sare ee qalabka shaqada, xitaa waxay sababi kartaa dhaawacyo iyo shilalka qalabka. , Taas oo saameyn ku yeelata tayada wax-qabadka iyo howlgalka nabdoon ee mashiinka mashiinka, sidaa darteed aaladda waxaa looga baahan yahay inay yeelato jabis fiican iyo ka-saarista wax-qabadka.